“Waan dagaalami doonaa ilaa iyo dhamaadka horyaalka Premier League” – Lacazette – Gool FM
“Waan dagaalami doonaa ilaa iyo dhamaadka horyaalka Premier League” – Lacazette
Dajiye January 20, 2019
(Arsenal) 20 Jan 2019. Weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette ayaa muujiyay sida uu ugu faraxan yahay guushii weyneyd ay xalay ka gaareen kooxda Chelsea.
Kooxda Arsenal ayaa guul wayn ka gaartay dhigeeda Chelsea oo marti ugu ahayd Emirates Stadium, kulankii London derby ee ka tirsanaa kulamada 23-aad horyaalka Premier League, kaddib markii ay ku garaaceen 2-0.
Hadaba Alexandre Lacazette ayaa ciyaarta kadib wuxuu la hadlay shabakada caanka ah ee dalka England BBC, waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ugu muhiimsanaa.
“Waxaan sameynay waxa uu naga codsaday inaan sameyno tababaraha reer Spain ee Unai Emery”.
“Waxaan dagaalanay inta ciyaarta ay socotay, kulanka ma ahayn mid fudud, aad ayaan u faraxsanaa sababtoo ah waxaan dhaliyay gool, waxaana caawiyay kooxdeyda”.
“Waxaan haatan seddex dhibcood ka danbeeynaa Chelsea, taasoo la micno ah inaan wali u dagaalami karno kaalinta afaraad, waxaan dagaalami doonaa ilaa dhamaadka”.
Si kastaba Arsenal ayaa haatan leh 44 dhibcood, waxayna fadhidaa booska 5-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna ka wada siman yihiin dhanka dhibcaha kooxda Man United, halka Chelsea ay booska kaalinta 4-aad ku fadhido 47 dhibcood.
Valverde oo si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska xidigaha kooxda Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Leganes
"Waxaan u dagaalami doonaa seddexda tartan ilaa dhamaadka xili ciyaareedka” - Santiago Solari